Ama hoo nu ga'ee du'aa ykn jireenya keessa tokko filana !!
Mandii fi Nejoon Karan cuufaa nu gargara Qilxuu Karaan diini of irra lola
Uumani Qilxuu kara 100,000 Shibiruu Musee Naafxanya tokko nu hin ajeeftuu, Oromoo diina jaalati hin buluu obsa keenyatuu dhumee ka'aa ni lola.
Diina kee dursite yoo hin ajeefnee isatuu sii ajeesa beekiiii
Oromoo waan beekuu qabdan Wayyanef sareen, yoo sodatan nama birra hin haaftuu gadii ba'aa Annaa Oromiyya hunda keessati of irrati lola
Wayyaneen Anaa Nejoo, Manasibu fi Qiltu Kara keessati Toftan Baratoota hisisa jirti.
Yeroo amma kana bakka baay'eetti wayyaanen namoota ishee ummata keessa gadii dhiisudhaan Ani waraana WBO keessan dhufe nama nu waliin qabsaa'u barbaadna jedhani erga namoota ijoodhaan jedhaman marisisan booda namoota mana hidhaatti gursisa akka jiran dhaga'ame.gochi kun keessuma lixa Wallagga Aanaa sadii keessatti sababa kanan namoonni baay'ee hiidhama jiru.Adaraa kee ummatni warreen gochoota akkasi irratti bobba'an hubate akka isaan irra fagatuf dhaamsa nuuf dabarsi. Dargagoon rakkon waan itti hadhayee jiruu meeshaa qabanin laga isaanti naman kara ganda hundati cufudha loluuf dirqaman jiruu. Polisoon Federla Aannaa Qilxuu kara keessati yeeroo ama kan "Hibirati Suuqi" bakka jeedhamuti Polisoota Oromiyya fi uumataa oromoo reeba jirachuun baratoon nu dhama jiru. Wayyanen Erga mana dhufee nu reebdee loluu malee fal birran hin jiru jeedhanruu. Akkasumas yeeroti ama kana keessaAanaa Qiltuu Karraatti hojjeta wajjira Nageenya kan ta'e namni Shibbiru Musee jedhamu namoota hedduu hisiisa akka jiru beekamera. Shibbiruu Musee jeedhe namii Nageenya Qilixuu karaa egsisuuf achi jirachuu hin qabuu, kan uumataa Qilxuu karaa Nageenya dhurkuu yoo ta'ee malee bakkan argamee waan argamee dhabasifamuu malaa.
Dhaga, Muka gurguda fi Konkolata kara irrati galgalchun kara hunda cufamuu qaba, Gooma gugurda karati guruun abidan gubuu, Riqichii gurgudan kutamee diina kara itti cuufu dha. Ummani hundi kara ganda isaa keessa dabarsuu bakka hundati cufuu qaba Finfinnedha kasii hanga fixee Oromiyati
Mootuummaan Naannoo Oromiyaa Nafxanya Oromoo irrati rammaduu isaa caalaa Polisiin Oromiyya yeerroo isaa Humana waran Polisii Federla reebama caalisee ilaalun isaa yakka. Kanaafuu Uuumani of isaan ijoole isaan of bulchuu qaba Humana waraana akamii iyuu Oromiyaa keessa ba’uu qaba. Mootumman Oromiyya Ummataa Qilxuu kara 100, 000 Nafxanya tokko ittigafatama nageenya goodhee ramaduun isaa jibinsa fi tufii uumataa Oromoo irra qabuu dha. Nafxanyaan shibiruu Musee jeedhamtu kun amoo Waraana Federala waamatee Polisii Oromiyya fi Ummataa Oromoo reeba waan jiruuf Uuumani of irrati falmachuuf murtefatee jira Nora ykn Dildila hunda kutuun Mootummaa Uumata dhabachuu qaba
Mootuuman Uumata ykn Shibiruu Musee fi Humana wana isaa keessa tokko filachuu qaba, Ararii hin jiru::